Etu esi ejikọ, wụnye na idozigharị ụdọ cha cha nke na -egwu ala? Dị ka onye nrụpụta agbụ ígwè njikọta nchara maka afọ 30, anyị nwere obi ụtọ ịkekọrịta ụzọ njikọta, nwụnye na ndozi nke Chains Flat Link Chains. ...
1. Ekwesighi ịkpụgharị na ịma jijiji mgbe etinyere sprocket na ogwe osisi. N'otu mgbakọ mbufe, ihu ngwụcha nke mkpanaka abụọ kwesịrị ịdị n'otu ụgbọelu. Mgbe anya dị n'etiti oghere dị ihe na -erughị 0,5m, ngbanwe nke kwere bụ 1mm; Mgbe ole ...
Mmepe nke usoro ọgwụgwọ ọkụ maka nchara nchara ọkwa dị elu 23MnNiMoCr54 ọgwụgwọ ikpo ọkụ na -ekpebi ogo na arụmọrụ nke eriri njikọ njikọ gburugburu, yabụ, usoro ọgwụgwọ ọkụ ọkụ nwere ezi uche na ịrụ ọrụ nke ọma bụ ụzọ dị irè iji hụ na ...
Round njikọ ígwè mmepụta usoro: mmanya ọnwụ, oyi ekwe, ing nkwonkwo, ịgbado ọkụ, isi mmezi, okpomọkụ ọgwụgwọ, sekọndrị mmezi (àmà), nnyocha. Ịgbado ọkụ na ọgwụgwọ okpomọkụ bụ isi ...
Nkịtị eserese Electrostatic Ịgba mkpuchi mkpuchi Electrophoretic mkpuchi SCIC-chain nọ na-enye r ...
Ọkwa 100 Alloy Steel Chain
site na nchịkwa na 21-04-10
Oghere nchara 100 alloy steel / silinti na -ebuli: agbụ agbụ 100 ka emebere maka mkpa siri ike nke ngwa na -ebuli elu. Ọkwa 100 Chain bụ ezigbo mma alloy steel dị elu. Grade 100 Chain nwere mmụba pasent 20 na oke ibu ọrụ dị ka atụnyere ...
Chain Mining SCIC maka nnyefe
site na nchịkwa na 21-04-04
agbụ ígwè na -ejikọ ọnụ nwere ụdị njikọ dị larịị emechara mkpuchi maka ihe mkpuchi ihu na -ebugharị ihu SCIC kacha mma maka * ekweghị ekwe * ike * ntachi obi.
Ngwongwo Alloy dị mma na -eme Chain njikọ gburugburu
Akara mkpirisi mkpirisi SCIC maka ibuli
site na nchịkwa na 21-03-12
A na-arụpụta ụdọ na ihe mkpuchi SCIC dị ka ISO 3076-3056-4778-7593 nke European EN 818-1/2/4 na ụkpụrụ DIN 5587 DIN5688. A na -eji ụrọ na ihe ndozi mee nke kacha mma karịa njirimara kacha nta edepụtara site na ...
Nlekọta & Njikere Nlekọta Chain & Sling
Nlekọta anya nke ọma Chain na slings na -achọ nchekwa nke ọma na mmezi oge niile. 1. Chekwaa yinye na agbụ agbụ n'osisi “A” n'ebe dị ọcha, kpọrọ nkụ. 2. Zere ikpughe n'ebe ndị na -ajụ ihe na -emebi ihe nọ. Chain mmanụ tupu nchekwa ogologo oge. 3. Agbanwela ọgwụgwọ ọkụ nke yinye ma ọ bụ sling comp ...
Nnyocha General Chain & Sling
Ọ dị mkpa inyocha ụdọ na agbụ agbụ mgbe niile yana idobe ndekọ nyocha niile. Soro usoro ndị a n'okpuru mgbe ị na -emepe mkpa nyocha na sistemụ nsuso gị. Tupu nyocha, hichaa agbụ ahụ ka e wee hụ akara, nicks, eyi na ntụpọ ndị ọzọ. Jiri n ...